Onye na-agba ume na-eme atụmatụ ịbọrọ nwa okorobịa George
N'izu ikpeazụ nke ụlọ akwụkwọ Thomas's Battersea, ebe a na-azụ Prince George dị afọ 4, ọ dị nnọọ njọ: na mbụ, ọrụ paparazzi na-arụ mgbe nile, na nke abụọ, ọdịdị nke ụmụ amaala na-erughị eru na nnyonye ha n'ọrụ nke ụlọ akwụkwọ ahụ. Dị ka akwụkwọ akụkọ Daily Mail si kọọ, na-ezo aka na isi mmalite n'etiti ndị nne na nna nke ụlọ akwụkwọ, n'ụbọchị nke ọzọ, e mere mgbalị iji weghachite Prince George. Otu nwanyị nwere ihe ngosi doro anya nke ara na-agbaso ụlọ akwụkwọ ahụ na ụmụ akwụkwọ ahụ, ịnụ ọkụ n'obi nwoke ya na anya ya, nnukwu akpa azụ na uwe ogologo ya, gwara ndị nkụzi a kpọrọ ndị uwe ojii!
N'ihi ngwa ngwa nke ndị uweojii na-ahụ maka iwu obodo, a gbochiri ihe egwu dị egwu. E jidere nwanyị ahụ ka ọ na-agbalị ịbanye n'ime ụlọ akwụkwọ, na ntanye nke iyi ọha egwu, ma dịka o siri pụta, ọ nwere mmasị na nwa okorobịa ahụ!
Mgbe a gbara ya ajụjụ, ọ pụtara na onye a na-amaghị ama dị afọ 40, ya na ezinụlọ ndị Britain na-ahụ ya n'anya. Nnyocha ahụ na-aga n'ihu, taa aha nwanyị ahụ na atụmatụ ya maka Prince George amaghị. Mana taa, nwatakịrị ahụ apụtawo na ụlọ akwụkwọ gbara ya gburugburu site na-ewusi ike nchedo! A gwara ndị nne na nna Thomas's Battersea ka ha ghara ikwu banyere ihe merenụ mgbe a na-eme nnyocha ahụ.
Ndị enyi ụlọ akwụkwọ mbụ nke nwa okorobịa ahụ!
N'agbanyeghị ihe ahụ merenụ, ihe omume a emetụtaghị ndụ Prince George. Nwatakịrị na-eto eto na-amalite amamihe mbụ ma na-enwe mmekọrịta enyi na ụmụ. Insiders na-ekwu na ọ na-etinye oge dị ukwuu na nwa klas ya - nwanne nna Maud Windsor.
Otu nwa nwanyị dị afọ anọ nke na-acha uhie uhie, bụ nwa nwanyị na-adịghị mma, bụ nwa nwa nwa nwanne Queen Elizabeth. Nwatakịrị nwanyị ahụ jikwa obi nkoropụ gaa ụlọ akwụkwọ na, dị ka Prince George, jidere nna Nna-ukwu Frederick Windsor n'aka.
Cousin Maude Windsor na Nna ya Frederick Windsor
Prince Charles, nna nna George, kwuru banyere ihe na-eme na nchegbu a:
"Nye George, oge na-abịa abịa. Ọ ga-amụta ịnọ naanị na ebe a na-amaghị ama na ndị mmadụ a ma ama, na-enweghị nne na nna hụrụ ha n'anya. O siri ike maka afọ anọ ya, ma ọ ghaghị ịgafe n'oge a nke ịmalite ma zụlite àgwà! "
Selena Gomez ghọrọ onye mmebe nke ngwa nke onye nchịkwa
N'ikwu eziokwu, foto nke onye na-eme ihe nkiri Angelina Jolie pụtara na ire ere n'efu
Irina Sheik, Vanessa Parady, na kpakpando ndị ọzọ gara oriri abalị gala nke Foundation Vogue
Tụkwasị na ezinụlọ: David Beckham na nwa ọhụrụ
Richard Gere na-alụ nwanyị enyi ya bụ Alejandra Silva n'oge na-adịghị anya
Chris Hemsworth fọrọ nke nta ka ọ nwụọ na Himalaya
Di na nwunye zuru oke: George na Amal Clooney na Met Gala 2018 na ndị sochirinụ nke ihe omume ahụ
Gina Torres mebiri di ya Lawrence Fishburne ma nweezi ike inweta onye hụrụ ya n'anya
Lindsay Lohan ghọrọ onye ụlọ ọrụ iwu
Eva Longoria abaghị uru ma mee ka ndị Fans jiri foto ọhụrụ!
Chloe Kardashian bu ụzọ chee ihu nwa nwanyị a mụrụ ọhụrụ
Onye na-eme ihe nkiri Chris Pratt kpasuru iwe ọkụ, na-etinye ọkwa maka ịcha nwa atụrụ
Ụdị afọ 57 nke Mercy Brewer pụtara na mgbasa ozi ejiji uwe
Enwere m ike iji Erespal na Proscan n'otu oge ahụ?
Olee otú na-eto eto pistachios?
Achịcha jelii "Mosa"
Isiokwu na shelves
Ihe ngbagha na - eme ka a ghara ịchọta
Cupcakes na mmiri sie gwakọtara mmiri ara ehi
Nri na Valentino
Mgbochi nke ime ihe - mgbaàmà na ọgwụgwọ
Ọmorrhoids mgbe amuchara nwa - ihe kpatara ya na ọgwụgwọ kachasị mma maka nne na-eto eto
Quizai bụ nanị panda na-agba agba n'ụwa!
Ụdị ọdịda dị n'ime ime - ụzọ niile dị iche iche nke mmepụta ihe nke usoro
Mmanụ aṅụ, lemon, olive mmanụ
Kedu esi edozi ihe eji eme ihe?
Lily-Rose Depp weere ya na mpempe akwụkwọ nke onwe ya
Akwa mmanya maka rabbits
Amber Anụwo hụrụ ndị akaebe abụọ ga-akwado njedebe nke Johnny Depp